Kalandrien Highway 1: 750 Miles of Scenery Spectacular
Ny fiara fitaterana an'habakabaka any Californie
Torolàlana azo ampiharina amin'ny fitondrana iray amin'ireo lalambe miavaka indrindra any Amerika
Ny lalam-be Kalifornia any Kalifornia dia làlam-panjakana. Miankina amin'ny Capistrano Beach any Orange County mankany Leggett any avaratr'i Mendocino, izay manodidina ny 750 kilaometatra. Azonao atao ny mifampizara azy amin'ny sehatra, maka ny ampahany aminy fotsiny mba hahitana na handehanana mandritra ny dia iray mandritra ny herinandro.
Na inona na inona ao an-tsainao, ity torolàlana ity dia mifandray amin'ny torolalana amin'ny antsipiriany ho an'ny kilaometatra tsirairay avy, manomboka any atsimo.
Orange sy Los Angeles County
Ny lalambe voalohany dia manomboka ao amin'ny tanànan'i Capistrano Beach any Orange County.
Avy any, mankany Santa Monica ary manerana an'i Malibu, tanàn-dehibe izany.
Mitaky anarana an-dalàmbe maromaro fa matetika antsoina hoe Pacific Coast Highway (izay mahalasa ho an'ny PCH). Eo anelanelan'i Manhattan Beach sy LAX, antsoina hoe Sepulveda. Avaratry ny seranam-piaramanidina mankany Santa Monica, ny Lincoln Blvd.
Ny arabe indraindray dia manaraka ny morontsiraka, fa matetika izy io dia mandalo faritra sy tranombarotra an-jatony. Raha te hanapa-kevitra raha te handefa azy ianao, dia jereo ny torolàlana ho an'ny làlana Pacific Coast Highway avy any Dana Point mankany Santa Monica . Raha mifampiresaka amin'ny fefy izahay, dia ilazako aminareo fa ny faritra tsara indrindra amin'io lalana io dia avy any Laguna Beach mankany Naples (atsimon'i Long Beach) ary avy any Santa Monica hatrany Malibu ka hatrany Oxnard.
Iray amin'ny faritra tena mampiavaka ny Hwy 1 dia mandalo amin'ny Malibu tsara tarehy. Ho an'ny ampahany voalohany amin'ilay dia, ny lalana dia mamela ny garazy sy ny varavaran'ireo trano amoron-dranomasina, fa ny avaratry ny Oniversite Pepperdine indraindray dia mivezivezy eo akaikin'ny faritry ny kaontinanta izy io ary toy ny hoe azonao atao ny mikaroka sy manangona ny rantsan-tànanao ao anaty rano.
Ity torolàlana ity dia manana ny antsipiriany rehetra momba ny fiara avy any Santa Monica mankany Oxnard .
Oxnard mankany San Luis Obispo
Avaratr'i Oxnard, CA Hwy 1 miara-miasa amin'ny US Hwy 101. Azonao ampiasaina ity toro-lalana ity amin'ny fitondrana 101 mba hijery izay azonao jerena eny an-dalana . Ny sakan'ny 101 eo anelanelan'ny Oxnard sy Santa Barbara dia manintona indrindra, miaraka amin'ny fomba fijerin'ny nosy Channel Islands .
Ny avaratry ny Tananan'i Gaviota (izay avaratr'i Santa Barbara) dia mivadika any an-tanety ny Hwy 101 ary tsy hahita ny ranomasimbe intsony ianao mandra-pahatonganao any Pismo Beach, ary avy eo vao fohy.
Hwy 1 dia miala avy ao Hwy 101 any avaratr'i Gaviota, mandalo an'i Lompoc sy Guadalupe alohan'ny hibanjina an'i Hwy 101 atsimon'ny Pismo Beach. Ity fizarana 50 kilaometatra ity dia antsoina indraindray antsoina hoe Cabrillo Highway. Azonao atao ny mitondra azy io raha te-handrakotra ny halaviran'ny làlambe malaza ianao, saingy tsy dia misy tombony firy raha ianao no hitsidihanao fotsiny. Avy ao Pismo Beach ka hatrany San Luis Obispo, ny Highways 1 sy 101 dia mitovy.
San Luis Obispo mankany San Francisco
Ny lalana eritreretinao ho ny Highway Pacific Coast dia angamba ny fizarana misy an'i San Luis Obispo sy Monterey. Anisan'izany i Hearst Castle, ny morontsiraka Big Sur, Carmel, Monterey ary Santa Cruz. Ity ny torolàlana ho an'ny zavatra hitanao sy ataonao eny an-dalana . Ity misy fampahalalana fanampiny raha toa ka mikasa ny hitoetra ela kokoa ao Big Sur ianao .
Ny tetikasa iray hamerenana ny fahavoazana ara-pahasalamana any Californie Highway 1 avaratr'i Ragged Point dia miteraka fahantrana sy fihenam-bidy lehibe amin'ny taona 2018 . Ity no fomba ahafahanao miatrika ny fanakatonana lalana sy ny zavatra tokony hatao mba hahitana ny fomba fijerinao nofinofisinao .
Amin'ny alalan'ny tanànan'i San Francisco
Ao amin'ny tanànan'i San Francisco, Hwy 1 dia làlana: 19th Avenue.
Izy io dia mitondra mankany amin'ny Golden Gate Bridge. Làlana be mpitia izay tsy dia mahita loatra ary ny fifamoivoizana izay mihoatra noho ny fanelingelenana. Afaka mamakivaky ny tanàna mora kokoa ianao amin'ny fitrandrahana an'i I-280 avaratr'i Pacifica na amin'ny fidirana CA Hwy 35 avaratra ary manaraka ny morontsiraka.
Avaratry ny Tendrombohitra Golden Gate, ny lalambe ofisialin'ny Highway 1 dia Shoreline Highway. Izy io dia mamakivaky amoron-dranomasina mampiavaka, amin'ny alàlan'ny maridrefy Marin, Sonoma sy Mendocino. Izany dia mifarana avaratr'i Rockport, izay itodihany mankany amin'ny Leggett ary mihitsoka.
Ity ny torolalana mitondra fiara avy amin'ny Golden Gate Bridge amin'ny alàlan'ny Marin, Sonoma ary Mendocino .
Ireo torohevitra sy hevitra ireo dia hanampy amin'ny fanatanjahantena mahafinaritra kokoa:
Jereo ny lasantsy gazy. Tsy misy solika efa misy any amin'ny 40 kilaometatra, indrindra any Big Sur sy avaratr'i San Francisco.
"Mandehana" rehefa manana fahafahana ianao. Toerana tsy voafetra ihany koa ny trano fivoahana.
Omeo fotoana betsaka. Alaivo sary an-tsaina hoe halaviran-dalana 30 kilaometatra isan'ora ianao (45 kph). Ny dia mankany Hearst Castle sy Big Sur avy any San Luis Obis dia afaka maka ny ankamaroan'ny andro. San Francisco ka hatrany Mendocino dia mety handrava ny fiara manerantany.
Raha misy olona iray ao amin'ny antokonao dia mijaly noho ny aretina mihetsika dia miomàna. Raha olon-dehibe manana fahazoan-dàlana io antoko io, andramo ampidino azy ireo mitondra fiara izay manampy ahy hanara-maso ny tsy fahampian-tsakafo.
Raha mandeha fiarandalamby iray ianao amin'ny lalana iray monja, mandehana avy any atsimo mankany avaratra raha afaka. Hisy fiara tsy mataho-dalana eo amin'ny sisiny ary ny fijery dia mazava kokoa any avaratra.
Raha mitondra fiara amin'ny lalana roa ianao (manao fiverenana mitsidika mankany Hearst Castle ao Big Sur, ohatra), aza misava ny fifamoivoizana mba hahita ny zavatra eny ampitan'ny lalana. Vonjeo izy ireo amin'ny fiverenana mitsidika.
Ny CA Hwy 1 dia mora amin'ny fihotsahan'ny tany, indrindra mandritra ny ririnina. Jereo ny fepetra amin'ny Internet na miantso ny 800-427-7623 alohan'ny handehananao. Ary izao ny tokony hatao raha toa ka mihidy ao Big Sur .
Fomba fanao mahazatra hatrany ny manaraka ireo toro-hevitra ara-tsosialy ireo, saingy lasa zava-dehibe kokoa izy ireo amin'ny alàlan'ny CA Hwy 1:
Mitondra fiarovan-tena. Esory ny toe-javatra mampidi-doza ary avelao ny elanelana eo anelanelan'ny fiaranao sy ny eo anoloanao.
Mitandrema! Ny lalàna Kalifornia dia mitaky izany ho an'ny mpamily sy ny mpandeha rehetra.
Manindrona fiara dimy na mihoatra manaraka anao. Lalàna ihany koa ho an'i Californie izany, fa raha tsy izany dia azonao atao ny misintona soa aman-tsara
Aza mandeha any amin'ny toerana misy loko mivadika. Ity fitsipika ity dia manan-danja kokoa noho ny hatramin'izay eo amin'ny sehatra boribory feno amin'ny lalambe izay voafetra ny fahitana.
California Prize Gay Gay ao Fresno any Fresno
Ny tsara indrindra any San Luis Obispo County Beaches
Valley Valley National Park, Californie
Ny fikarakarana sakafo tsara indrindra sy dihy any Kalifornia
Ny fitsaboana ara-pahasalamana ara-pahasalamana mitady fahasalamana any ivelany. Ianao ve?
Ny Andron'i St Patrick any Salt Lake City
Dance Performances any Portland Oregon
Tranofiaram-pitaterana ny Virgin Islands Travel Guide
Ny zavatra lehibe tokony hataonao ao Bora Bora
Zarkana any Las Vegas avy amin'i Cirque Du Soleil - MISY
Fandefasana pasipaoro sy visa ho an'ny Travel America Atsimo
Manambady any Irlandy Avaratra
Inona no atao hoe Grass amin'ny jiolahy Britanika ary ahoana no ahazoanao zana-tany?
Torohevitra sy toro-hevitra momba ny fitsidihana an'i Shina amin'ny ririnina
7 Zavatra efa hitranga any Kiobà
Amoebas ao amin'ny atidoha: Orlando Summer Safety
Rawhide ao amin'ny Wildhorse Pass